Global Voices teny Malagasy » Indonezia: Môske-n’ny polisy nokendrena mpanapoaka tena · Global Voices teny Malagasy » Print
Indonezia: Môske-n'ny polisy nokendrena mpanapoaka tena
Voadika ny 21 Avrily 2011 12:58 GMT 1	 · Mpanoratra Tikno Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Indonezia, Ady & Fifandirana, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Politika
Nisy mpanapoaka ny tenany amin'ny baomba iray nanafika ny môskea Adz-Zikro izay ao anatina faritra marolafin'ny polisy ao an-tanànan'i Cirebon  tany Indonezia tamin'ny Zoma 15 Aprily lasa teo. Ampolony no naratra nandritra vavaka isan-joma nipoahan'ny baomba. Indonezia moa no firenena be mponina maro miozolomana indrindra manerantany, ary tao anatin'ny taona vitsivitsy izay dia tafihana vondrona mpampihorohoro maherisetra ity firenena ity.
Ao amin'ity lahatsary am-pinday  izay navoaka tao amin'ny YouTube ity no ahitana ny tao anatin'ny môskea vantany vao nisy ny fanapoahana baomba.
Nahagaga  olona maro any Indonezia ity fanafihana ity indrindra ho an'ireo izay mampifandray ny fanapoahana baomba amin'ny vondrona Islamika fanatika. Saingy tsy mahazatra kosa izany famonoan-tena manapoaka baomba toy ny tany Cirebon izany rehefa ny trano fivavahana miozolomana indray no kendren'ny mpampihorohoro.
Lalana afovoan-tanàna Cirebon, Java andrefana. Sary takelaka Flickr an i Swaradila Weesy
Nanao ahoana ny tora-pon'ny mpamaham-bolongana Indoneziana?
Manontany i Multibrand  hoe nahoana moa no tafiditra tanaty môske tsy voasakan'ny polisy ilay mpanapoaka baomba:
Raha heverina hoe efa mazoto amin'ny fanoherana an-dalambe i Muhammad Syarief (ilay ahiahiana ho nanapoaka baomba),efa namotika tsenakely ary ahiahiana ho namono manamboninahitra ao amin'ny tafika, tsapako fa tena hafahafa tanteraka izany hoe tafiditra tao amin'ny moskean'ny polisy tsy nisy nahamarika izany izy.
Rantau Pincono  moa nanentana ny olona, ary anatin'izany ny fampahalalam-baovao, tsy hampifandray avy hatrany ity fanapoahana baomba ity amina vondrona islamika:
Seharusnya aparat, pemerintah dan media tidak terburu-buru untuk mengeluarkan analisa atau wacana bahwa pelakunya dari kalangan Islam. Hal ini akan menyesatkan masyarakat Indonesia dan menciptakan rasa curiga dan ketidak percayaan antar masyarakat yang memicu konflik horizontal. Stigma buruk dan pelabelan Islam sebagai dalang teroris sebenarnya sudah tidak layak untuk dijual dan dijadikan dagangan untuk proyek yang lebih besar yaitu mengebiri sikap kritis anak bangsa yang menginginkan perbaikan.
Tsy tokony ho maika tsy faingana na ny solontenam-panjakana na ny fampahalalam-baovao hilaza na hamoaka famakafakana fa vondrona islamika no namoa-tsampona. Mety hahadiso hevitra ny Indoneziana maro izany ka hiteraka fifampiahiahiana sy tsy fifampitokisana eo amin'ny fiaraha-monina ka hitarika fifandirana hafa. Tsy mendrika ny tetikasa goavana hampiroboroboana ny fomba fihetsika ataon'ny zanaky ny firenena mitady fahalalàna tsara kokoa ny manasongadina sy mametraka ho marika fa ‘tompon'antoky ny fampihorohoroana’ ny Islamo.
Nolazainy tsy misy olakolaka ao amin'ny lahatsorany moa fa “ISLAM BUKAN TERORIS” (TSY MPAMPIHOROHORO NY ISLAM) .
Forum Demokrasi  mino fa tsy mifandraika amin'ny resa-pivavahana ity asam-pampihorohoroana farany ity:
Tetapi kita bisa menyimpulkan bahwa siapa pun kelompok dan otak dibalik serangkaian terror bom tadi, sat hal sudah jelas bahwa pada dasarnya terror bom bukan sekadar soal pertarungan pada wilayah keagamaan, tetapi lebih luas wilayahnya, sampai ke ranah politik local yang tak menutup kemungkinan berkaitan dengan jejaring iternasional, sebagaimana yang selama ini terjadi.
Saingy afa-mamehy tsy tsirairay fa na iza na iza atidoha nikotrika ny fanapohana baomba nisesisesy, ny zavatra iray mazava dia tsy mijanona amin'ny sehatry ny fivavahana fotsiny ity fampihorohoroana amin'ny baomba ity, fa amina sehatra midadasika kokoa, ka mety hipaka amin'ny sehatra politika anatiny izay mety hisy fifandraisana ihany koa amina tambajotra iraisampirenena.
Keluarga-Madinah  nanamarika ny tatitra nataona fahitalavitra iray fa mety ho misy fiokoana komonista ao anatin'ity fanapoahana baomba ity:
Kabar terbaru dari Telewicara TV One News dengan Al-Chaidar tadi sore, kemungkinan pelaku bom bunuh diri tersebut adalah kader komunis, yang ingin mengadu domba antar agama di Indonesia.
vaovao farany tao amin'ny TV One nandritra ny fifampiresahan-davitra niarahana tamin'i Al-Chaidar io tolakandro io, no nilazany fa ny mety ho nanao ny fanapoahana baomba famonoan-tena dia olona ambony komonista te-hampiady ny fivavahana any Indonezia.
Misy tantara hafa mahaliana ao ambadik'ity raharaha ity. Ny Printsy Raja Mochamad Saladin, zokiolona tao amin'ny Sultanat Kanoman , dia nanamarina fa ity mamono tena manapoaka baomba Muchammad Syarief ity dia manana ràn'andriana  avy ao amin'ny lapam-panjaka Kanoman. Avy amin'ny reniny no ananan'i Muchammad Syarief tetiharan'andriana saingy napetraky ny ao an-dapa ho olo-tsotra izy satria nanambady olo-tsotra ny reniny. Saingy, noho ny fihetsika tsy nety nataony, dia nolavin'ny tao an-dapa ny handevina azy ao amin'ny fasan'andriana. Na izany aza, hatramin'izao dia tsy mbola mahita porofo mampifandray ny heloka bevava amin'ny fianakaviam-panjaka ny polisy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/04/21/16541/
 lahatsary am-pinday: http://www.youtube.com/watch?v=451d4T3LKzA&feature=player_embedded
 Rantau Pincono: http://rantaupincono.blogspot.com/2011/04/islam-bukan-teroris-negara-harus.html
 Forum Demokrasi: http://fordem.org/?p=48
 Sultanat Kanoman: http://en.wikipedia.org/wiki/Kraton_Kanoman